Teny vitsivitsy amin'ny lohahevitra somary tsy mahazo aina. | Avy amin'ny Linux
Teny vitsivitsy amin'ny lohahevitra somary tsy mahazo aina.
Nano | | GNU / Linux
Tsy te-hiteny ho toy ny vetaveta maharikoriko aho na toy ny mpandraharaha bastard avy any amin'ny helo (na dia izany ary tsy lanjaiko ny rantsan-tànako hanadala olona amin'ny omnipotence eto amin'ity tranonkala ity) fa reraka ianao indraindray ka mila manome lesona vitsivitsy ao amin'ny ny fomba fitondran-tena amin'ny Internet
Betsaka no efa mahay manao azy, hainy ny manao aza manao troll ary hain'izy ireo ny miady hevitra amin'ny toerana samihafa amin'ny lohahevitra samihafa. Ny sasany kosa tsy manao izany.
Amin'ny tranga sasany, toa tsy takatry ny olona sasany ny mahasamihafa ny serivisy sy ny fampiasa isan-karazany, hoy ny bilaogy, forum, tambajotra sosialy, lisitra mailaka, sns. Ny olona izay tsy mahatakatra ny maha samy hafa ny inona no ilana bilaogy ary inona no atao hoe forum.
Ireo karazana olona izay mameno ny mailanao amin'ny zavatra toy izany "Tsy mety amiko ny webcam" o "Ahoana no hametrahako zavatra toy izany amin'ity rafitra ity?". Tsy isika izay ao amin'ny vondrom-piarahamonina Linux no tsy te-hanampy sy hamaha ny fisalasalana, raha ny tena izy dia tianay izy io satria io no fomba famerenana zavatra miverina amin'ny vondrom-piarahamonina izay nanome antsika be dia be, saingy zavatra iray ny valio ny fanontaniana ao anaty forum, Ao anaty lisitra fandefasana mailaka, manomeza tendron'ny alàlan'ny twitter ary ny iray hafa tena hafa dia manafika ny taninao manokana izy ireo manontany anao na mampiasa fomba tsy mendrika izy ireo amin'izany.
Ohatra iray lavorary dia ny antsika eto amin'ny DesdeLinux izay tato ho ato dia tototry ny "lahatsoratra" miandry izay ataon'ny olona dia ny fisalasalany manokana momba ny lohahevitra X, zavatra toa Misy mahalala ny fomba hampiasana an'io amin'ny distro toy izany? Tsy natao ho an'ny inona fa izany no Foro ary ny IRC.
Ary miteny ny tenako amin'ireo olona tsy mahatakatra an'io aho: tompokolahy, tsy ianareo irery no olona manana fisalasalana eto amin'ity izao tontolo izao ity, tsy izy ireo ihany no manana olana na olana, ary tsy zava-dehibe kokoa noho ny hafa ny mandray valiny na toerana manokana any ho any hamaha ny fisalasalanao. Tsy mahazo aina, amin'ny tsiro ratsy, tena ratsy tarehy ny mamafa ireo hafatra ireo na tsy maintsy mamaly azy ireo "Hey, ampiasao ny forum, azafady" rehefa zavatra tokony ho takarina izany. Miezaka mafy amin'izany izahay, manandrana manolotra izay rehetra anananay mba hitombo sy hianarana ny mpiara-monina; amin'ny tsiro mahatsiravina izay, manome azy ireo izay rehetra azontsika omena azy ireo izy ireo dia te hampiasa ny fomba tsy vonona hanao izany karazan-javatra izany ho tombontsoany izy ireo.
Angamba ny tsy fahalalàna tsotra fotsiny ny zava-drehetra (amin'ny fomba tsara) fa ilaina ny mampianatra fa misy fomba sy fomba tsy mitovy amin'ny tsy ahazoana valiny amin'ny fanontanianao sy ny fampiasanao bilaogy, ny fandefasana mailaka na hafatra manokana fa tsy vahaolana, raha misy zavatra hevitra, forum, IRC's, sns.
Fantatro fa fohy ity ary tsy misy ifandraisany amin'ny lohahevitray mahazatra, saingy efa nilaina izany, raha ny marina dia nitandrina zavatra maro aho satria tsy tsara tarehy ny marina ary tsy te-hanao makiazy aho. Manantena aho fa ho lesona izany ary tsy miresaka amin'olona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Teny vitsivitsy amin'ny lohahevitra somary tsy mahazo aina.
80 hevitra, avelao ny anao
Manaiky tanteraka aho fa nano, fa alaivo an-tsaina hoe, indraindray isika dia mampiasa izay anananay voalohany ary ampidiriko ny tenako satria mpikambana mavitrika ato amin'ny forum eto amin'ny tranonkala mametraka fanontaniana aho ary manampy ny mpampiasa iray na hafa amin'ny lohahevitra izay sy / na Manjaka amin'ny lohahevitra sasany ao amin'ny Linux aho.
Tokony ho fantatra fa ho an'izay dia misy ny fomba natokana ho an'ny zavatra tsirairay, saingy minoa ahy fa tsy io irery no tranokala miatrika an'ity karazana olana ity ary mandra-pahafantaran'ny mpampiasa izany dia tsy misy ilana azy ny milaza azy ireo ampiasao ny forum sns raha omentsika azy tsara sy tsara dia ho tafintohina izy ireo ary mety misy aza mitsahatra tsy mitsidika ny tranokala akory!
Hehehe, heveriko fa raha manontany sy mangataka isaky ny lahatsoratra izy ireo dia tsy izany
Lynze dia hoy izy:
Marina izany, misy foana ny olona _mangataka_ izay anampianao azy ireo. Ho an'ity karazan'olona ity dia tarihiko eto foana izy ireo: http://goo.gl/fjD7a 😉
Valio i Lynze
Mbola marina izany amin'ny maha-tempoly ahy, izaho tenany ihany dia namaly ny sasany tamin'ireo tao amin'ny Linux Mint Hispanic Community.
Ilazako hatrany ireto olona ireto mba hanaraka ireto dingana ireto:
1) Mikaroha forum / chat / wiki / bilaogy ofisialy na vondrom-piarahamonina distro resahina na ankapobeny (toa an'ity)
2) Miantso an'i Google (izany no ilaina)
3) Ary raha tsy hitanao ny valiny na tsy azonao ny zavatra iray dia manontania
HAHAHA. Tsara! Tsy nahalala azy aho. Hampiasaiko manomboka izao miaraka amin'ny sasany izay manararaotra ny fanontaniana.
Raha misy fihenam-bidy sy fanajana tsara dia tsara ny mifampandehandeha, mifampandany ary mifandramatra dia ampahany amin'ny fiainana sy fahavelomana isan'andro, raha ny marina miaraka amin'ireo namako dia mandehandeha sy misavoritaka foana isika.
Tsara ihany koa ny manafosafo sy mamono ireo izay mandray am-po tokoa ny zava-drehetra, marina izy ireo ary mandeha miaraka amin'ny fihenan-dàlana tery tontolo andro: mahafinaritra ny mahita ny fomba fanodinam-bolantsika azy ireo tsikelikely ary alaivo an-tsaina hoe ahoana no isintonan'izy ireo ny volony. miaraka amin'ny hevitray, eaaa !! xD Heveriko fa niara-nitazam-pandrika indray mandeha isika rehetra tamin'io lafiny io ary mahatsikaiky rehefa tsapantsika fa nitifitra anay ny hdp ary niditra toy ny soavaly izahay, satria mangidy!
Ny atao hoe diky dia ny fanaovana herisetra amin'ny trolling, mahatonga ny olona hahatsiaro ho ratsy maimaimpoana, ronono ratsy izany ary tsy tokony hodinihina ny gilada.
Ho an'ny ambiny, ny lahatsoratrao dia mametaka copie iray hafa novakiako tao amin'ny Taringa.
(Nah lainga, trolling fotsiny!)
Heveriko fa olona tsy mandany fotoana mitady ny olany izy ireo, fantatro ny momba ny Linux, misaotra an'i google, ary mamaky boky sy forum.
Mbola tsy nanontany akory aho hoe ahoana no hametrahana zavatra, vitako foana ny nahita ary naharitra ela izany.
Kannabix dia hoy izy:
Ary ny nettiquete? toa tsy misy mahatadidy azy intsony ...:
Mamaly an'i kannabix
Ny lesoka dia reggaeton be dia be eran'izao tontolo izao, SMS sy ireo zavatra rehetra mahatonga antsika hihena isan'andro ... Muahahahaha
Elav nahita ny hazavana ve ianao ary nankeny amin'ny ilan'ny vatolampy ??? Lazaiko izany satria milaza zavatra mifanohitra amin'ny reggaeton ianao ??? hahahahaha arahaba tompoko
Mamaly an'i ariki
Ary elav amin'izao fotoana izao dia «Hell he, ho ela velona rock & roll! lml »eo am-pihainoana an'i Don Omar sy fandefasana SMS amin'ny sakaizany skritoz azi, TPT.
Hahaha, tsara kokoa ny tsy andefasana azy ireo haka azy roa hahaha .. Ary raha tompoko dia efa nihaino an'i Rock foana aho 😛
Tsy tiako na inona na inona ary tsy mihaino rock aho, avy amin'ny Dance aho, indrindra fa tamin'ny taona 90: p
laslas dia hoy izy:
Eny, alohan'ny tsikera dia tokony hahita bebe kokoa any an-trano ianao, satria ny fahitanao ny sarinao ary miaraka amin'izay fijerinao izay dia nametaka satroka ianao ary ho azonao antoka fa ho diso ianao amin'ny maha-mpanao rap na mpilalao reggaeton anao, satria efa nolazaiko ianao, mandoko azy ianao dia manana azy toy izany. xD
Mamaly an'i laslas
Heveriko fa ny DesdeLinux dia ohatra mazava fa amin'ny fanehoan-kevitra dia mety misy troll, na isika tenantsika aza dia manao vazivazy foana, ary izany karazan-javatra izany hahatonga ity bilaogy ity ho toerana mahafinaritra kokoa. Tsy hiova mihitsy izany, raha ny fanajana no ifotoran'ny zava-drehetra.
Fa izay lazain'i nano dia marina, toa misy mpampiasa tsy nahatsapa fa tsy forum ity ary mamoaka lahatsoratra hamahana ny fisalasalany sy ny olany. Angamba tsy dia manana kolontsaina momba ny serivisy amin'ny Internet isan-karazany izy ireo ary mieritreritra aho fa ny fanabeazana azy ireo no asantsika voalohany amin'ity tranga ity.
Enga anie tsy haverina intsony ireo zavatra ireo, ary raha hitranga dia efa hanana mailaka avy any aminay ao anaty boaty box izy ireo
Raha ny marina dia mampihomehy izany, ny trolling no nampiasan'ny Courage ny baolina na tamiko rehefa nibolisatra tamin'ny forum anime aho.
Ny tiana holazaina dia hoe mety ho sosotra isika, saingy saika tsy mbola nitranga tamin'ny olon-dehibe izany.
Entana tsy misy ifandraisany
guan dia hoy izy:
Manana fomba iray hahatonga ny webcam hiasa amin'ny facebook na amin'ny pejy internet aho, mazàna dia tsy avelako hanao izany fa nanova alalana tselatra aho ary izay no izy, aiza no toerana mety indrindra hametrahana azy?
Mamaly an'i guan
ve izany trolling sa matotra?
dia matotra. izany no nanontaniako azy ireo momba ny toerana mety indrindra 🙂
Valiny tamin'i Guan
oh diso ve ny nolazaiko teto xD?
tsia, tsy ratsy, raha manana ny toro-hevitra rehetra ianao, dia misorata anarana ao amin'ny bilaogy ary andefaso ilay lahatsoratra any am-piandrasana, izaho no hiandraikitra ny famoahana azy ny tenako
eny, raha miandry ahy momba ny 10 min miaraka amin'ny pikantsary ianao dia manao ny zava-drehetra 🙂
efa ity nano ity, heveriko fa nanitsy azy tamim-pahamendrehana aho ary mety nanana hadisoana tsipelina ihany haha
@nano: Tamin'ny asako dia tsy maintsy nanao torolàlana momba ny fampiasana ny lisitra mailaka sy ny forum amin'ny internet aho, ny fomba hampianarana azy ireo hametraka fanontaniana, hangataka fanampiana, satria tena troglodytes ao anaty lava-bato ireo, mihaza elk na mifamono na aiza na aiza. fa ...
Saingy tsy hiova mihitsy izany, ny olona amin'ny ankapobeny, na farafaharatsiny farafaharatsiny lehibe amin'izy ireo, tsy mampiasa saina, tsy manararaotra ny faharanitan-tsaina, tsy manao [na dia tsy mahalala ny fotokevitra] fitrandrahana angona aza izy ireo, zahao ny satan'ny kanto amina lohahevitra iray, tototry ny fahalalana izy, na mivezivezy amin'ny Internet miaraka amina tanjona raikitra ... Ankehitriny, anontanio azy ny tantara farany amin'ny asa fampisehoana na ny fampiharana farany navoaka tao amin'ny Facebook, na ny sarimihetsika inona no William Levy manao?
Avy eo hoy izy ireo, hoy izy ireo tamiko, mitsikera izahay, tsy manampy olona, ​​fa mpihaza an-dranomasina izahay, raha fintinina, habibiana an'arivony. Rehefa tapitra ny andro dia SORATRA AHO! Raha fantatro ny antony tsy nahatongavan'izy ireo dia teraka miaraka amin'ny atidoha daholo ve isika sa isika irery?
Tsy miady amin'izany intsony aho, fa very maina ny tenanao, ry namako ...
hahaha marina ny anao, misy ny olona tsy mahay akory ny mampiditra tariby USB (nenitoan'ny kohaka kohaka) ny tsy fahalalàna dia zavatra ananantsika rehetra, angamba amin'ny sehatra samihafa, fa izany no antony ananantsika koa fahaizana manadihady, mieritreritra, mitady valiny iray.
Ny fitsidihako ireo dinika isan-karazany nandritra ny fotoana nijanonako tao amin'ny GU / Linux, dia hitako fa toe-javatra misy izy ireo.
Ny faharetana, heveriko fa nanao izany isika rehetra indray mandeha, ha.
Mitenena ho anao fa tsy nanao izany mihitsy aho. 😛
Manaiky tanteraka aho nano, zavatra iray izay lasa mandreraka nefa araka ny voalaza maromaro dia tsy toe-javatra mitranga eto izany fa zavatra mandeha lavitra kokoa, ary misy ifandraisany amin'ny fanabeazana kely an'ny olona na dia mandany fotoana aza. hahita fa misy forum ary tsy afaka miandry ny rehetra hamaha ny fisalasalanao ianao raha tsy manome fampahalalana mifandraika amin'izany, na manoratra amin'ny mail sns.
Manaiky aho fa indraindray ny zavatra tsotra dia manahirana ny hafa ary mora kokoa ny manontany toy izay mikaroka. Izaho manokana dia efa nitranga tamiko ary nanontany tena aho izao fa ao amin'ny LINUX aho. amin'ny WINDOWS tsy nitranga tamiko izany. fa namaly fanontaniana maro. ny sasany tsotra be nefa ilay olona dia nanomboka ary mitady ny mora indrindra. ohatra hoe ahoana ny maka tahaka ny rakitra amin'ny fampirimana hafa na ahoana ny fomba hamoronana fampirimana vaovao?
Ny fatiantoka ao amin'ny LINUX dia tsy dia ampiasaina loatra (ankehitriny hitako fa efa betsaka ny olona mampiasa azy, ao anatin'izany ny tenako) ary efa ho 90% no mampiasa windows ary misy afaka manampy anao. ary amin'ny LINUX vitsy ny olona mahalala asa maro amin'ireo rafitra miasa ireo.
Na dia mieritreritra aza aho fa afaka mianatra be dia be amin'ny fikarohana, fametrahana fanontaniana, fitsidihana forum sns. Nefa toa ela kokoa vao mianatra.
Te hiala tsiny amin'ny maha-iray amin'ireo manontany be dia be ahy aho ary tafiditra ao anaty fanontaniana mivantana toy ny fomba fametrahana programa, na ny fomba famoahana zip amin'ny Linux.
Raha hanao veloma ianao dia tiako ho fantatrao fa ny andro hahafantarako betsaka momba ny LINUX ary ho azonao antoka ny fomba fanaovana azy. matokia fa ireo vaovao ao amin'ny LINUX dia hovaliako ny fanontanianao rehetra na dia tsotra toy ny mamadika solosaina aza izy ireo. (na dia mila manao ora vitsivitsy amin'ny alina aza aho rehefa any an-trano)
Mbola averiko ihany ny fialan-tsiny noho ny fanelingelenana nataoko tamin'ny fanontaniako. Hitady vaovao aho nefa tsy manontany. ary amin'ny toe-javatra faran'izay sarotra, dia hitako fa sarotra ny manaisotra ny LINUX ary miverina amin'ny WINDOWS ary ho isan'ireo kivy aho toa ny maro izay mandeha manodidina milaza fa sarotra ny LINUX.
Heveriko fa efa nanao fikarohana tsara aho, hahaha! Manantena aho fa hahatakatra ahy ianareo indraindray, misy fanehoan-kevitra hafahafa isika. toetran'olombelona !!!!! Fa lazaiko aminao marina tokoa fa tsy hisahirana amin'ny fanontaniana tsotra ho an'ny manam-pahaizana LINUX aho ary fanontaniana sarotra ho an'ny zaza vao teraka!
gildiberto dia hoy izy:
ara-drariny sy marina ny hevitrao
Mamaly an'i gildiberto
Alohan'ny hiverenanao amin'ny Windows, andramo ny diso hafa sy ny tontolo iainana hafa. Ny GNU / Linux dia tsy ny Fedora sy GNOME Shell ihany. Novakiako tao amin'ny lahatsoratra ny fanontanianao ary te hanampy anao aho, saingy tsy afaka miala amin'ny adihevitra izahay amin'ny famaliana ireo fanontaniana izay tsy misy ifandraisany amin'ireo lahatsoratra. Azonao atao ny mametraka ny fanontanianao momba an'i Fedora amin'ny: http://foro.desdelinux.net/viewforum.php?id=3
Nano, heveriko fa ny anao dia toerana fihatsarambelatsihy na avo lenta, noho izany dia nampiharihary antsika rehetra ny fisalasalantsika, ny olantsika ary ny tsy fahalalantsika zavatra maro, anisan'izany ireo mpitantana sy mpamorona an'ity bilaogy ity. ny zava-dehibe dia ny fanajana izany. Ambonin'izany, novakiako matetika ny fomba hamahan'i Elav sy ireo mpiara-miasa hafa tena mahay hamaha ny fisalasalantsika na raha tsy izany dia hamaha ny fisalasalana ho an'ireo "izay mahalala tsara indrindra" izahay ary tsy mahatonga ny olona hanao troll. Ankoatr'izay, izany no iray amin'ny tanjon'ny DesdeLinux. Nano, amin'ny fanajana feno, ny hevitrao dia avy amin'ny tena Troll.
Ping85 dia hoy izy:
Manatevin-daharana ny hevitr'i @ mfcollf77 aho, avo lenta kokoa noho ny olombelona rehetra i Nano, miala tsiny aho noho ny fametrahana fanontaniana sy fangatahana fanampiana, tsy fantatro fa izany dia antony iray nahatonga ny fandikan-dalàna.
Valiny amin'ny Ping85
Andao hojerentsika, amin'ny ampahany, tsy maintsy mamaky tsara ianao rangahy, raha mahatsikaritra ianao nano dia tsy manonona na inona na inona momba ny tsy manontany, fa ny manontany amin'ny toerana izay TSY mety, ny fanehoan-kevitra bilaogy dia matetika no toerana tsara indrindra ary kely kokoa rehefa tsy misy na inona na inona ny Fanontaniana. ifandraisany amin'ilay lahatsoratra voaresaka, noho izany antony izany dia misy forum ary io no ahafahanao manampy amin'ity karazana olana ity. Ary ny zavatra iray hafa dia tokony ho fantatrao amin'ny fomba nanoratany nano fa somary matanjaka ny toetrany sy ny fiteniny fa tsy midika izany fa olona ratsy izy na tsy manampy ny hafa izy rehefa manana olana.
Ny tiana holazaina dia hoe Nano, nampiasa ity bilaogy ity hanehoany ny fisalasalany, ny ahiahiny ary ny fanontaniany tsy amin'ny toerana marina, saika amin'ny alàlan'ny hafatra ataon'izy ireo toy ny olon-kafa rehetra. Ny toe-tsaina mieritreritra roa sosona avy amin'i Nano no mahasosotra.
Azo antoka, saingy hita fa io no toerana mifanentana aminy satria mpanoratra / mpitantana ny tranokala izy ary ity bilaogy ity ihany koa dia mampiantrano lahatsoratra momba ny hevitra fa tsy fampahalalana fotsiny. Raharaha hafa ny fizaranao ny heviny na tsia.
Tsy te hilaza aho fa, rehefa manao fanamarihana momba ny lahatsoratra iray izay tsy nosoratany i Nano, dia matetika no mametraka fanontaniana amin'ny toerana tsy mety ao amin'ity bilaogy ity izy. Manaiky an'i Nano aho, raha izy koa no nanao izany hadisoana nataontsika rehetra izany.
@Rayonant, misaotra tamin'ny fanohananao, fa afaka milamina tsara aho amin'ity 🙂
@ Ping85 aloha dia tiako ho anao ny mijery ny lahatsoratra feno, tsy milaza ny fisalasalako aho amin'ilay hoe Iza no angatahiko fanampiana? Mieritreritra aho fa tsy misy olona, ​​miteny aho fa avelao ireo lahatsoratra misy andalana telo, izay ahariharanao fa misy fisalasalana momba ireo izay apetraka ao anaty seha-pifanakalozan-kevitra hahafahan'izy ireo mamaly tsara azy ireo amin'ny fanehoan-kevitra ... Tsy hitanao ve fa manana feno ve ny bilaogy ary ny asa rehetra takian'izany? Mihevitra ve ianao fa tsy hanelingelina ny mpamaky hafa ity karazana fanontana ity? Tongava lahy, azafady.
Zavatra iray hafa, mieritreritra aho fa ny maha-admin / mpanoratra / BOFH / lord-of-the-darkness-izay-mitondra-environment-avy amin'ny linux (xD) dia tsy manome ahy zo hametraka fanontaniana ao anatin'ity haino aman-jery ity, ... ... vita ve? Nisy nahita ve ny lahatsoratra iray izay anehoako mivantana ny fisalasalako manokana momba ny lohahevitra iray? Satria raha ny fahazoako azy ary azoko tsara ny momba ny zavatra, ny fisalasalana rehetra izay nambarako tao amin'ny lahatsoratro dia efa tany amin'ny faran'ny azy ireo, taorian'ny nanomezako ny vaovao rehetra, ny zavatra toa «Ary tonga ny fahalalako, raha misy mahalala zavatra hafa, tongasoa ao amin'ny hevitra» Ka noho izany, tsy vitan'ny hoe milatsaka ratsy ny fanehoan-kevitrao, fa tsy dia miorina tsara izy ireo ary manondro ahy olona manana fenitra avo roa heny, misy fanafody ho an'io mpiara-miasa io: aza vakiana ny lahatsoratro raha tsy tianao izy ireo.
Mikasika ny tenako dia olona manam-pahalalana bebe kokoa aho na sosotra amin'ny fangatahana vonjy, rangahy, manana fahasoavana hijerena ny forum mihitsy ve ianao? Mijanona eo amin'ny G + ahy? Hizaha ny lahatsoratro? Hanontany ahy ny tantarako momba ny fanamarihana? Heveriko fa maro amin'ireo olona mahalala ahy ato amin'ity vondrom-piarahamonina ity no mahalala fa iray amin'ireo izay miezaka manampy betsaka indrindra aho, na dia tsy mahalala kely aza dia manomboka mijery izany ao anatin'ny dingana ianarako zavatra ary manamora ny zavatra hitako aho.
Ralehilahy, tsy natao ho an'ny tsy misy na te-ho ratsy, fa mankanesa any amin'ny afobe, tsy rariny raha miresaka ahy ianao nefa tsy manana hevitra tsy fantatra.
Azoko atao ny mamaly an'i Nano amin'ilay vola kely ihany; miaraka amina andiana expletives sy ozona, fa ho fanajana ireo mpamaky ny DesdeLinux dia tsy hataoko izany, etsy ankilany, mino aho fa tokony ho nosoratana tamina fomba matotra sy kanto kokoa ity lahatsoratra ity. amin'ny tsipika telo fotsiny no milaza fa ny bilaogy dia manana faritra ahafahanao mandefa fanontaniana sy ahiahy fa tsy mampiasa fantsona mahazatra ho an'ity tanjona ity, misaotra anao tamin'ny sainao; afaka miteny zavatra tsy misy ratra be ianao ary eo an-tampon'ny mpitantana bilaogy.
Fombako miteny, maneho ny hevitro, manan-kery ny hevitrao, eny, saingy tsy manome anao ny antony izany na manamarina ny fahazoanao mamaky.
Ratsy loatra, avelao eto mandra-pahatongan'ity.
Compadre comprehensre comprehensre, ny zavatra lazainy dia hoe ataon'izy ireo amin'ny toerana mifanaraka amin'izany, IRC ary Forums.
zavatra tiako momba forumsuse.com dia iray amin'ireo orinasa manana diablorojo, indrindra fa tiako ity rohy ity izay tiako zaraina aminao: http://lmgtfy.com/
rehefa manomboka mivezivezy sy mampiasa linux mihoatra ny zava-drehetra ny olona iray, heveriko fa tafiditra ao anatin'ny fahadisoana isika amin'ny fampiasana bilaogy na forum be loatra amin'ny famelana ireo wiki sy google; Nolazaiko ho an'ny tranga manokana ananako fa tao amin'ny forum archlinux dia nomen-dry zareo daka aho izay maharary ahy ny mamily ahy amin'ny wiki ... tamin'ny voalohany dia nahasosotra ahy izany ary nijanona aho "p # $% raha afaka mandany fotoana hamaly ahy izy ireo dia afaka nanome ahy ny valiny "na dia eo am-piandohana aza ny fiafaran'ny zavatra rehetra ary tamin'ny faharetana kely dia vitako ny nahatakatra ny fomba fizarana ny zava-drehetra ary nanomboka nampiasa wiki bebe kokoa aho izay namahana ny zava-drehetra na nikaroka tao amin'ny google ...
Aza manahirana ny olona raha toa ka maniraka anao hitady izany ao amin'ny google na amin'ny wiki ho an'ny zavatra iray (aza manao toa ahy) fa miarova faharetana, izany no ianaranao ... ary raha ilaina dia raiso ity lol http://lmgtfy.com/ amin'ny fotoana famaliana
Nano, nanao troll entana Troll ianao.
Tiako ny fidirana. Heveriko fa ho ahy manokana, ny tenako dia latsaka tao amin'ireo fanao resahina ao @Nano ary inona no tokony hotandremana, tsy noho ny tahotra ny hanafintohina olona, ​​fa satria very ny fahatsapana ilay lohahevitra. Tonga hatramin'ny resaka fandraisana anjara amin'ny fahazarana eto, no fantatro hoe aiza no toerana hanaovana consultations ary iza no ho fanehoan-kevitra. Na dia izao aza, marina fa indraindray dia mora kokoa ny manontany ao amin'ny forum DesdeLinux noho ny manontany amin'ny forums distro, angamba noho ny zavatra niainako ratsy tamin'ny fitadiavana valiny tamin'i Debian na OpenSuse, izay toa tsy fahalalam-pomba ary mampiala voly ny newbies (efa niainako imbetsaka tamin'i Debian). Etsy ankilany, ratsy ny fiteniko anglisy ary izany dia mahatonga ny googling indraindray ho fomba sarotra.
Amin'ny fanehoan-kevitra tsy misy hafa.
Manana "namana" na "olom-pantatra" aho dia olona tsara fanahy, mpiara-miasa, vonona hanampy ny hafa foana. Raha tany amin'ny fampianarana ambaratonga faharoa, izany hoe, tsy nahazo diplaoma tamin'ny sekoly ambaratonga faharoa, fony izy nianatra tany amin'ny anjerimanontolo dia mbola olona iray ihany izy, tamin'ny fotoana nahazoany diplaoma dia niova kely ary tsy lazaina intsony rehefa nahazo mari-pahaizana master dia nahavita 360º. izao dia olona hafa izy.
Ho an'ireo "namana" dia nilaza izy fa mandany azy amin'ny zavatra rehetra ary tsy hanampy maimaim-poana, ny fakana hevitra rehetra dia miteraka sarany. Ekeko fa nandany azy ny fianarany. fa tsy manaiky aho na tsy misy namana na olom-pantatra mahazatra manampy azy, na dia asakasakiny aza ny valiny. Raha tsy misy vola tafiditra dia tsy mikasika ny resaka consultation izany.
Mampatsiahy ahy koa ireo dokotera sasany izay nanao fianianana fa hanampy foana ireo sahirana, saingy hitako ny dokotera sasany fa mety mila dokotera ny olona iray any amin'ny toerana tsy misy hopitaly akaiky ary eo ilay dokotera ary tsy mikarakara. ny sahirana. aloavy fotsiny izy. Manontany tena aho hoe: aiza ny fianianana?, Ny andraikitra ara-tsosialy ananan'olona.
Mety hiala amin'ny lohahevitra aho. Te hilaza fotsiny amin'ireo izay mahalala kely momba ny LINUX aho fa marina ny azy ireo fa nandany azy ireo ny zavatra fantany saingy tsy tokony ho tsy mahalala fomba isika amin'ny hafa ka mitovy amin'ny toe-javatra misy antsika na saika mitovy amin'ny tsy nahalalan'izy ireo. . ny mahasamihafa anao dia olona miezaka mafy ianao. ary miarahaba anao aho noho izany.
Mariho fa afaka mahita fifanoherana mahaliana amin'ity tranga ity ianao. Ny fahalalana azon'ny olona iray dia tena sarobidy, ary raha afaka manararaotra ianao dia tsy hitako izay maharatsy azy.
Ohatra, ny zavatra fantatro zaraiko nefa tsy andoavam-bola amin'ny alàlan'ity bilaogy ity, saingy tsy midika izany fa tsy afaka mandoa vola any an-kafa aho amin'ny fanomezana fanohanana, satria amin'ny farany, ny fahalalako izany ary ataoko aminy izay tadiaviko. Izay no antony tsy itsarako izay mahazo tombony, amin'ny fampiasako izay nianarako dia ho fantatr'Andriamanitra ao anatin'ny firy taona.
Miankina amin'ny tsirairay avy izany.
Mialà sasatra, ity no farany farany ataoko, tsy hanelingelina intsony aho. fandrao sakanany eto aho.
TPT. Efa nesoriko tamin'ny tratrako io. Milamina aho izao .. ok.!
Fantatro fa olona mangina izy ireo ary raisina an-tanan-droa ny hevitra rehetra. izany no demokrasia.
Miarahaba antsika rehetra ary mirary soa amin'ny hetsika ataonao isan'andro
Tsy mila miala tsiny be loatra ianao ary afaka maneho hevitra amin'izay rehetra tadiavinao, milamina.
Tsy misy olona hanakana anao, azo antoka izany 🙂
Ñandekuéra dia hoy izy:
Salama, misarika ny sainao aho hanontany hoe ahoana no ahafahako mametraka Internet Explorer amin'ny Arch, tena tsy manam-potoana handehanana mikaroka ao amin'ny google aho….
hahaha, manadala fotsiny.
Heveriko fa tsara izay lazain'izy ireo, saingy misy ny sasany izay mivezivezy ary manafika ratsy ireo mpampiasa vao, ary misy ireo izay tsy mahalala akory ny fikarohana ao amin'ny google na aiza no antony anontaniany.
Tamin'ny andro iray hafa dia namaky iray izay nanontany aho fa tsy fantatro ary novaliany toy ny hoe "Nanoratra sudo rm -fdr / *" tamina konsol aho, haha ​​... ary raha nanao izany izy dia hadinoy fa milalao Linux izy indray ...
Mamaly an'i Ñandekuéra
Ny linux mitovy amin'ny endrika c: XD
Ny nataon'izy ireo taminy dia tena ratsy xD
Hahaha, hitako fa tsy azon'ny sasany ny votoatin'ny zavatra navoakanao, raha fintinina, ny varotra amin'ny varotra.
Raha ny zava-misy, nano, tiako ny hizaranao bebe kokoa ny anao - haavo ara-tsaina avo lenta kokoa noho ny olombelona rehetra - hahahahahaha, ahoana no nahatonga ahy hihomehy.
Inona no mitranga dia rehefa nandeha ny fotoana dia toa nanangona mpankahala sasany aho; Ataoko fa ny fialan'i Courage tamin'ireo mpiasa, ny mahantra tavela tsy nisy niady na / na mitsikera ny fihetsik'izy ireo ary ankehitriny dia mihazakazaka toy ny kisoa may hilaza amiko na inona na inona izy ireo satria "manana toetra mavesatra sy ratsy aho", tsara, Inona no azoko holazaina, heveriko fa ny sary ananako amin'ny maha-avatar ahy dia tsy milaza fa olona avy amin'ny "ronono tena tsara" xD aho.
Fa inona no azo atao? Efa nolazaiko etsy ambany io, averiko eto, tsy hankahala ireo mankahala, mandalo ny lahatsoratro izy ireo ary mandalo ny fanehoan-kevitr'izy ireo xD
Noho ny fahasarotako sy ny fahatahorako dia tsy nianatra nanontany mihitsy aho. Fantatro izao fa ny fahalalana mangataka (sy manontany tena) dia manana fototra betsaka noho ny fahalalana rehetra azo. Mazava ho azy fa manontany amin'ny fotoana sy toerana mety ... (taratra amin'ity kofehin'ny fahalalan'ny fiarahamonina ity).
Ka rehefa mametraka tutorial amin'ny forum aho dia tsy mety izany?
Tsia, satria ny forum dia misy fizarana fampianarana. Fa maninona izy ireo no manizingizina fa mitady lalana manodidina zavatra tsotra be toy izany?
Ka midika izany fa tsara kokoa ny tsy manontany eto amin'ity pejy ity raha misy fisalasalana momba ilay lahatsoratra navoaka. Raha diso aho dia hazavao fa tsy te-hampahatezitra olona amin'ny fanontaniana mety ho vendrana aho, na dia hadalana aza ny fanontaniana tsy apetraka
Vakio tsara izay nolazaiko tao amin'ilay lahatsoratra:
Tsy isika izay ao amin'ny vondrom-piarahamonina Linux no tsy te-hanampy sy hamaha ny fisalasalana, raha ny tena izy dia tianay izy io satria io no fomba famerenana zavatra miverina amin'ny vondrom-piarahamonina izay nanome antsika be dia be, saingy ny zavatra iray dia ny valio ny fanontaniana ao anaty forum, Ao anaty lisitra fandefasana mailaka, manomeza tendron'ny alàlan'ny twitter ary ny iray hafa tena hafa dia manafika ny taninao manokana izy ireo manontany anao na mampiasa fomba tsy mendrika izy ireo amin'izany.
Tsy mampaninona anay ny mamaly na mampianatra, ny famaliana sy ny fampianarana NO ANTONY IZAO FIOMBONANA. Ny zavatra manelingelina dia rehefa manandrana mampiasa tsy mendrika izy ireo mba hanehoana ny fisalasalany.
Tokony hazavainao fa ny fametrahana fanontaniana ao amin'ny faritra misy ny fanehoan-kevitra dia tsy ratsy raha mbola mifandray amin'ny lohahevitr'ilay lahatsoratra izy ireo.
Heveriko fa tsara ny fanontaniana rehetra. Fa tsara kokoa ny manao azy ireo ao amin'ny forum http://foro.desdelinux.net/ .
Ny zavatra tsara indrindra dia ny tsy miraharaha ireo lahatsoratra Nano ary mamaky ireo lahatsoratra hafa izay mavesatra toa ny an'ny namako Elav (fandraisana anjara lafo vidy ary tena mianatra mihazona Linux ny iray), ny famakiana an'i Nano dia miafara amin'ny toetra ratsy, tsy haiko. Raha somary masiaka ny fomba fanoratany na tsy azony amin'ny fomba fanoratany, manomboka androany dia voarara amin'ny famakiko i Nano. Tampoka teo dia bandy be fikasana izy nefa tsy hainy ny mampita azy.
Haters hankahala xD
Raha mora kokoa ny manontany toy izay mikaroka kelikely, fa ny fisoratana anarana amin'ny seha-pifanakalozan-kevitra hampiasa azy io in-1 na in-2 fotsiny, satria tsy mandeha io.
ary amin'izay ao amin'ny forum dia alefany any amin'ny wiki / google ianao.
Marina, nefa, misoratra anarana amin'ny forum iray na 1 na 2? Heveriko fa tsy izany, raha ny marina, raha hisoratra anarana amin'ny forum ianao, na raha hanomboka amin'ny Linux ianao dia tsy hanana fisalasalana iray na roa, hanana be dia be amin'izany ianao.
Zavatra iray hafa dia ny ao amin'ny lahatsoratra miresaka momba ny fametrahana fanontaniana fa amin'ny toerana tsy mety, izay midika hoe mamorona kaonty; Mitranga izany amin'ny zavatra andefasan'izy ireo fanontaniana amin'ny lahatsoratra mbola miandry ary voasoratra izy ireo satria hametraka ny fanontaniana ao anaty forum izy ireo, tsy mahazo aina izany satria mila mamafa ilay fanontaniana ianao, avy eo mandefa mailaka manazava ny antony nanaovanao azy ary avy eo manantena ianao fa misy izany aza manelingelina an'izany.
Azonao ve ny hevitro? Tsotra kokoa ny mandeha mivantana amin'ny forum.
Eny, fanontaniana iray na roa dia hanana fisalasalana maro ianao fa rehefa mihaona amin'ireo mpampiasa izay mandefa anao amin'ny wiki / google fotsiny ianao na milaza aminy fotsiny hoe vendrana ianao fa amin'ny teny hafa dia tsy te hiverina intsony izy ireo.
ny lahatsoratra dia tsotra takarina, ny olana dia ny fihetsika ... vao mainka tsy namaky azy tanteraka aho.
saingy tsotra kokoa ny manontany mivantana ao amin'ilay lahatsoratra, izany no mahatonga ny olona manao azy.
Tsy nisy nilaza fa ratsy ny manontany ao anaty ireo hevitra ireo. Mazava ho azy, tsy hamaha fanontaniana mega amin'ny hazo goavambe amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny bilaogy aho, azafady.
ny zavatra angatahina ao anaty bilaogy dia zavatra tsotra, toy ny fametrahana / fanavaozana ny firefox / google chrome amin'ny ubuntu, mpampiasa vao izy ireo, sa tsy izany?
Efa mpampiasa misavoritaka amin'ny vatan-kazo amin'ny programa iray izy satria efa manana fahalalana antonony / mandroso ary mampiasa forum na aleo mitady irery mba hialana amin'izany rehetra izany.
Marina izany, tsy misy milaza fa ratsy ny manontany amin'ny hevitra, ny olana dia ny fomba angatahanao azy ireo tsy hanao izany.
Heveriko fa taratry ny tena fiainana tsotra izao ... raha tsy misy fanabeazana eny an-dalana, eto dia ara-dalàna raha tsy hitantsika koa izy io. Na dia mizara kely ny hevitr'i Ping85 hanoratra azy amin'ny fomba kanto kokoa aza aho ... inoako fa avy amin'ny fanahinao nano izany!
PS: Halludaaaaaa! tsy mety amiko ny wecammm! (sangisangy izany)
Ny tena ratsy indrindra dia rehefa milamina handamina ilay "olana" ianao ary mamaly ny fahanginana. Amin'ny farany, sisa aminao ny fanontaniana raha hanompo anao io sa tsia. Fa io koa dia toa tsy vonona hiara-hiasa amin'ny vondrom-piarahamonina izy ireo, satria ny valiny, na inona izany na inona, dia maneho sy mahasoa hatrany ny tsirairay.
Enta-mavesatry ny fitsaboana sarotra izy ireo. Na eo aza izany, ao amin'ny bilaogiko ho fanampin'ny tsy fanaraha-maso ny hevitra, tsy mamafa izany aho. Raha tsy hoe faniratsirana na olana toa izany izy ireo.
angelblade dia hoy izy:
Ny manelingelina ahy dia ny fahanginana na rehefa manontany zavatra amin'ny fantsona hafa ankoatry ny lohahevitra napetraka izy ireo
Mamaly an'i angelblade
ratsy ny marina rehefa mihetsika toy izany ny mpampiasa.
Hanjary adala isika Nano, miady amin'ny olona rehetra tsy mitovy hevitra aminy, tsy ho nitranga io fifandirana io raha nosoratana tamina fanabeazana bebe kokoa ilay lahatsoratra, nifanaraka tanteraka tamin'i sieg84.
PS: NANO lasa Courage vaovao antsika, tsy haiko, raha zavatra tsara na ratsy ho an'ny DesdeLinux.
Niady tamin'ireo izay mitondra ahy ho olona manana fari-pitsipika roa ihany aho. Fantatrao fotsiny fa tsy izaho no nanao an'ity lahatsoratra ity satria nahatsapa aho fa nanao azy, nataoko izany satria nifanaiky ny mpiasa rehetra ary satria sahirana izahay noho ny antony tian'izy ireo hampiasa ny bilaogy ho fomba iray manokana hamahana ny fisalasalana.
Tsy hitako amin'ny ampahany amin'ny lahatsoratra ny tsy fanajana olona ary nohazavaiko fa tsy misahirana mamaly fanontaniana izahay, fa izany no vonona ny fomba, tsy nilaza mihitsy aho hoe tsy tsara ny manontany amin'ny fanehoan-kevitra. satria raha ny marina dia manampy amin'ny fisalasalana kely foana izahay amin'ny fanehoan-kevitra, ary rehefa lehibe izy ireo dia mangataka aminao izahay mba handefasanao azy ireo any amin'ny forum hahazoana fampiononana bebe kokoa.
Tsy tiako ny manaraka an'ity drafi-pamaliana ity, saingy toa efa noraisinao manokana izany ary isaky ny fanehoan-kevitra dia manandrana manao ahy ho toy ny olona ratsy ianao na toy ny biby goavambe manafika zazavavikely; Ary koa ny Ping85, mangataka aminao aho mba hijery ny forum na anontanio ao amin'ny IRC ho ahy, mba hahitana raha misy milaza fa olona tsy mifandray tanana aho na hijery raha tsy mahazo fandraisana anjara amiko ny forum.
Amin'ireo hevitra maro nataonao dia antsoinao hoe troll aho, saingy, raha tsapanao izany amin'izao fotoana izao, dia lasa mitovy ianao, satria ianao irery sy manohitra ahy irery, toy ny hoe voaroaka na zavatra toa izany aho; troll incendiary ianao.
Tiako raha milaza hevitra ianao, dia manana ny fahaizanao manao izany rehefa miresaka ny lohahevitra fa tsy mifantoka amin'ny fomba fanoratako, manao na tsy manao zavatra; Raha tsy te hamaky ny lahatsoratro ianao, avia, aza manao izany, tsy manome sakafo ahy ianao ary tsy manoratra manokana ho anao hamaky ahy aho, apetraho ny roa amin'ireo nolazainao dia ianao antitra.
Tsy hainao ny mihaino, miaraka aminao izahay Nano (miombon-kevitra amin'ny lahatsoratra rehetra izahay), ny tsy tianay dia ny manaitra azy. izany hoe olona maro no nilaza taminao fa tsy miresaka afa-tsy izay ao fa tsy ny atiny.
ny hevitry ny hevitra ...
Tsy afaka nilaza izany tsara kokoa aho.
Fampidirana ny lafiny maizin'ny mozika
Antony 5 mahatonga an'i Microsoft ho lasa toa an'i Apple